Indawo yokuhlala yokuThuthukisa / iFomula yeB&B okanye iApartment - I-Airbnb
Indawo yokuhlala yokuThuthukisa / iFomula yeB&B okanye iApartment
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uEmanuele iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala yinxalenye yeNdawo yokuHlala ebekwe kumbindi wendalo kwi-Euganean Hills Natural Park eVeneto kwiphondo lasePadua. Ifanelekile kwiholide enoxolo. Nomnyango ezimeleyo ibekwe kumgangatho osezantsi equlathe:. Okulala 2 elinezihlalo 7, lokuhlambela enkulu kwisitya, ilifti, okudlela igumbi, ikhitshi ngokupheleleyo, ifriji, ngetoaster, i-onti, umatshini ikofu, izitya, yaye zonke izinto eziyimfuneko ukuze ukupheka. I-Smart TV kunye ne-WIFI.
Sintywiliselwe kwi-Euganean Hills Park. Ungandwendwela isixeko samaxesha aphakathi sase-Este esimalunga neekhilomitha ezisi-8 ukusuka kuthi. Kwakhona kwiimfuno zakho zokuqala zemihla ngemihla yiCinto Euganeo. Lelona lizwe likufutshane apho unokufumana iivenkile ezinkulu kunye neevenkile zeemfuno ezisisiseko. Siphawulwa kukuthula okuboniswa ngezandi eziqhelekileyo zendalo.
Indalo ibonakalisa ubumelwane bethu kunye nezidiliya ezisingqongileyo. Iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kuthi iMyuziyam yeCava Bomba eCinto Euganeo.
UEmanuele kunye nam noMichela sihlala ecaleni kweB&B. Sisoloko sifumaneka kuyo nayiphi na imfuno. Ukuba ufuna ukungcamla iglasi elungileyo yewayini evela kwiiNduli ze-Euganean, siququzelela ukungcamla kwindawo yethu engaphantsi komhlaba.